Roll U samaynta Machine, saqafka Machine Sheet, meesha biyomareenka Machine Making - Zhongtuo
Cangzhou ZHONGTUO duudduuban mishiino la xirrira waa soo saaraha xirfad iyo dhoofisaa oo waa qof ku taqasustay design ah, horumarinta iyo wax soo saarka ah oo duudduuban qabow mashiinada la xirrira. Shirkadda la shaqeeyaa dhowr warshado wax soo saarka iyo ganacsiga la xidhiidha. Injineerada iyo farsamo ay hodan ku yihiin waayo-aragnimo ah ee naqshadaynta, horumarinta, iyo wax soo saarka ee mashiinada. Waxaan bixin in arrimuhu cusub tiknolojiyada fiiro dhow. Dhamaan waxyaabaha raacaan heerarka tayada ee caalamiga ah oo ay si weyn u mahad suuqyada dunida oo dhan. Waxyaabaha Our ayaa la dhiibay in ka badan 40 dal ...
Square biyaha hoos biibiile roob Mashiinka qaadashada la ...
Stud Track Machine, Line Tube Hg50, Sheet saqafka Machine Making Tile, waxaad huwataa Birta U samaynta Makiinado , Machine Step Making Tile , Rolling shutter Door Roll U samaynta Samaynta Makiinado ,